Ibsa Ejjennoo Qeerroo Naannoo Matakkal. | QEERROO
Ibsa Ejjennoo Qeerroo Naannoo Matakkal.
Uummanni Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz jiraatu Hacuuccaa Mootummaa gabroofataa wayyaaneen irragahaa jiruu fi Shira mootummaan wayyaanee bifaa fi haala adda addaan irratti xaxaa jiru ofirraa molqee gatuuf qabsoo hadhaawaa gaggeessaa turuunsaa fi jiraachuunsaa nibeekama. Akkasumas qabsoo guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jirus Qeerroon Oromoo naannoo Beenishaangul gumuz qoodaa fi dirqama lammummaa isaa bahaa jira.
Qabsoo hadhaawaa uummanni Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz gaggeessaa jiru kana danquuf sabboontotaa fi abbootii qabeenyaa qaqqaalii fi Abdii Uummata Oromoo ta’an godinaalee Beenishaangul uummanni Oromoo baay’inaan keessatti argaman kanneen akka matakkal, Aanaa yaasoo fi Magaala Asoosaa keessaa adamsuun mana hidhaa wayyaaneetti guuraa fi hiraarsaa turan, jirus. Akkasumas ajjeesaa fi qe’eefi qabeenya isaaniirraa buqqisaa jiru. Uummata naannichaas saboota naannichaa biroo wajjin walittibuusaa fi rakkoo dinagdee garaagaraaf saaxilaa jiru.
Dhimma Kanaan walqabatee, dhuma bara 2017 darbe kana mootummaan wayyaanee karoora haaraa baasuun namoota Keessa uummata Oromoo beekaniifi hojii gantummaan muuxannoo qaban lafa jiranii barbaadee Uummata Oromoo naannichaa irratti shira garaagaraa irratti xaxaa ture. Kanas hojii jalqabaa Dr. Amsaaluu (presidaantii yuuniversiitii Asoosaa kan ta’an) iin jalqabamee ture. Kunis Uummata Shinaashaa naannicha jiraatan aanaa Gilgel Balasitti walitti qabuun uummata Nagaa Oromoo naannichaa irratti kaasuun walitti buusuuf karoorfachaa fi uummata amansiisaa turuun isaa niyaadatama. Karoorri isaanii kunis qabsoo hadhaawaa qeerroon Oromoo naannichaa godheen fashaleera.
Yeroo ammaas, Dr. Amsaaluun ergamaa fi qajeelfama wayyaanee irraa fudhate galmaan gahuuf Itti aanaa piresidaantii Yuuniversiitii Asoosaa kan ta’an Obbo Naahoo Jeems dhalootaan saba Gumuz kanta’an dabalachuun yakka uummattoota naannicha bakka hin buunee fi seenaan hin daganne Barattoota Oromoo Yuuniversiitii Asoosaa keessaa baratanii fi Uummata Oromoo Godina Matakkal, Kaamaashi, Aanaa Yaasoo fi Magaalaa Asoosaa keessa jiraatan irratti raawwachaa jiru. Namoota hedduus mana hidhaatti guursisuuf qophiixumuranii jiru.
Namoonni ergama fudhatanii addadurummaan hojii kanarratti bobba’anii jiranis:
1. Dr. Amsaaluu Presidaantii Yuuniversiitii Asoosaa ( Yuuniversiitii Wallaggaa yeroo turantti sabboontota barattoota Oromoo hedduu hiisisaa fi ajjeesisaa turuunsaa ni yaadatama; yeroo ammaa immoo ergama addaa uummata Shinaashaa fi uummata Oromoo naannichaa walitti buusuu fi Barattoota OromooYuuniversiitii Asoosaa gooluu irratti fudhachuun bira gahameera)
2. Obbo Naahoo Jeems (Itti aanaa pirezidaantii Yuuniversiitii Asoosaa, barattootaa fi uummata Oromoo naannichaa keessumaa uummata Gumuz, Bartaa fi Maa’oo Koomoo wajjin walitti buusuuf qajeelfama addaa kan fudhatee fi Dr Amsaaluu wajjin hidhata Cimaa kan qabu ta’uun beekameera).
3. Obbo Balaay Wadiishaa (Komishinii farra malaammaltummaa naannoo Beenishaangul kanta’eefi bara 2016 tti sabboontota Oromoo naannichaa eeruu qaama mootummaafi dhiimmoota nageenyaaf kennuun kan hiisise) fi
4. Obbo Taayyee (Hojii gaggeessaa olaanaa naannoo Beenishaangul Gumuz kanta’an) ta’uun bira gahameera.
Uummanni Oromoo fi Qeerroon Bilisummaa Oromoo Naannoo Beenishaangul Gumuz namootiin Shira uummata Oromoo naannoo Sanaa buqqisuu fi duguuggaa sanyii Mootummaan Wayyaanee karoorfate keessatti hirmaachaa jirtan irraa akka of qusattan isin akeekkachiisa. Yoo tuffii fi yakka kanatti fuftan Uummanni Oromoo naannichaas ta’e Guutummaan Uummata Oromoo callisee kan hin ilaallee fi tarkaanfii keessa deebii hin qabne akka fudhatu isin beeksifna.
Dhuma irrattis Qeerroon Oromoo naannichaa uummata Oromoo Biyyaalaa fi keessa jiraatu hunda Shira wal irraa hincinnee fi yeroo yerootti bifa jijjiiruun Uummanni Oromoo Nnaannoo Beenishaangul Gumuz lafarraa dhabamsiisuuf taasifamaa jiru hubachuun uummata Oromoo naannichaa cinaa akka dhaabbattan Waamicha goona.
Amajjii 20, bara 2018
IUOf, Qeerroo Matakkal, Asoosaa irraa.